एसिड हमलामा परिवर्तित कानुन ! - विदेशबाट - नेपाल
एसिड हमलामा परिवर्तित कानुन !
संगीता मगर, १६, लाई ताकेर ०७१ फागुनमा काठमाडौँको एक ट्युसन सेन्टरमा भएको एसिड हमलाको क्षतिपूर्ति अझै दिइएको छैन । एसिड प्रहारबाट मगर र उनकी एक सहपाठी घाइते भएका थिए । मगरको अनुहार, छाती, पेट र खुट्टामा एसिडको असर परेको थियो । तत्काल क्षतिपूर्तिका लागि नेपालको कानुनमा व्यवस्था नै छैन । महिला कानुन तथा विकास मञ्चले रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले उक्त व्यवस्था परिवर्तन गर्न लागेको छ । गत महिना सर्वोच्चले नेपाल सरकारलाई त्यससम्बन्धी कानुन निर्माण गरी तत्काल क्षतिपूर्ति र आवश्यक पर्ने संवेदनशील तवरको रेखदेखको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
नेपालमा बर्सेनि औसत ४० एसिड प्रहारका घटना हुने गरेका छन् । दाइजो नल्याएका कारण परिवारभित्रै पनि यस्ता घटना हुने गरेको पाइएका छन् । दोषीलाई भने आठ वर्षको सजाय र दोषीलाई तीन लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति तिराउने भन्ने छ । बेलायती समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ, ‘धेरैले त्यसमध्ये पनि निकै कम क्षतिपूर्ति पाउँछन्, त्यो पनि विलम्ब गरी अदालतले फैसला सुनाएपछि मात्र । त्यसबीचमा भने पीडितले दृष्टि गुमाउने र अनुहार छियाछिया हुनेजस्ता थुप्रै खाले मूल्य चुकाइसकेका हुन्छन् ।’
नेपालसँग सिक्दै अफगानिस्तान
कृष्ण मन्दिरको बखान
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल
प्रतिदिन चार यौन हिंसा
नोट कोरे कारावास
सगरमाथा फेरि नापिने
गोर्खा ब्रिगेडमा नेपाली महिला